» एउटा प्रेमिल ईतिहास जस्तो प्रकाश र अनिताको ‘फुटेका चुरा’
एउटा प्रेमिल ईतिहास जस्तो प्रकाश र अनिताको ‘फुटेका चुरा’
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १९:५३
चन्द्र घलान,मकवानपुर, २१ मंसिर । ईतिहासमा त्यस्ता कयौँ वास्तविक प्रेमका कथाहरु छन् जुन कथा मानिसको मृत्युसँगै मानिसहरुको स्मरणबाट हराएर जान्छ । मानिस मरेर माटोमा मिलेपछि उसको जीवनको अपूर्ण वा पूर्ण कथा सबै समयसँगै मानिसको मानसपटलबाट हराएर जान्छ । मानिसलाई केबल युद्धका ती विर कथाहरु मात्र याद रहन्छ जसले सृष्टिकर्ता र मानिसको अस्तित्वलाई सधैँ चुनौति दिन्छ अनि मर्नु नै जीवनको दरिद्रताको पाटो भएको अपूर्ण सत्यलाई मानिसको मनमा डर र त्रास बनाएर ठप्प पारिदिन्छ । अटल प्रेम र वास्तविक प्रेमको कथा थोरैले मात्र याद गर्छन् अनि त्यसलाई जीवनमा आत्मासाथ गरेर अघि बढ्छन् । जसले अटल प्रेमको आभाष गर्छन् उनीहरुका लागि आसाहरु जिवितै छन् अनि आसाहरु पुरा हुनेपनि छन् । एउटा यस्तै आसालाग्दो प्रेमकथा बोल्छ गायक प्रकाश सपूत र गायिका अनिता चलाउनेको ‘फुटेका चुरा’ ले । आसालाग्दो यस अर्थमा कि यो प्रेमकथाले पूर्णता पाउनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो रिभ्यू–
गायक प्रकाश सपूतको बोल माया र गलबन्दी जस्ता बहुचर्चित गीतहरुको पारख गरिसकेका दर्शक श्रोताहरुका लागि यो एउटा मिठो खुराक हो । अनि प्रकाशको कल्पनाको एउटा रमाईलो पक्ष उनको कथात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । बोल माया र गलबन्दी जस्ता गीतमा कथासँगै भाबुक बनाएका प्रकाशले यो गीतमा पनि एउटा प्रयोग गरेका छन् त्यो हो ‘सस्पेन्श’ अर्थात एउटा अधुरो कथा । फुटेका चुरामा नायिका नम्रता श्रेष्ठको रानीको चरित्र लोभलाग्दो छ अनि सेना नायकका रुपमा देखिएका प्रकाश र उनीसँगै आसपास देखिएका मन्त्री र युद्धकालिन् सेनाहरुको कथा एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । सेनानायकलाई मनमा बास बसाएकी रानीले भिडियोको अन्त्यमा चाल्ने कदमले दर्शकहरुलाई एउटा कौतुहलता जन्माउँछ । रानीका शब्दहरुले सोच्न बाध्य बनाउँछन् ।
वास्तवमा रानी के चाहान्छिन् ? रानी सेनानायकलाई मार्न चाहान्छिन् वा बचाउन ? रानी सेना नायकलाई माया गर्छिन् वा घृणा ? यस्ता सोच्न बाध्य बनाउने प्रशन्हरुसँगै म्युजिक भिडियो सकिन्छ । सम्भवत प्रकाशले यो कथालाई अर्को गीतमा पूरा गराउनेछन् जुन कथा निक्कै रोचक हुने अनुमान लाउन सकिन्छ ।
गीतका शब्दहरु, भाका र संगीतले दर्शक श्रोताको मन जित्न सक्ने सम्भावना छ तसर्थ यो गीत अहिले युट्युब ट्रेण्डिङमा पनि परेको छ । प्रकाश सपूतको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट नोभेम्बर ३०,२०२० मा प्रिमियर गरिएको फुटेका चुरामा प्रकाश सँगै अनिता चलाउनेको सुमधुर आवाज समावेश छ । उनीहरुलाई कोरसमा बाबुकृष्ण परियार, आकाश नेपाली, अमित सुनार , स्मृति शाही, पुष्पा बोहरा, सुनितामी परियार र एञ्जीला रेग्मीले सघाएका छन् । प्रकाशकै शब्द र सँगीतमा तयार भएको गीतलाई योगेशकाजीले एरेञ्ज गरेका छन् भने ब्यागराउण्ड स्कोर पनि योगेशकाजीले नै दिएका छन् । ड्रिम्स स्टुडियोमा दिपेन धामीले रेकर्ड गरेको यस गीतलाई प्रिज्म डिजिटल स्टुडियोमा श्यामस्वेत रसाईलीले मिक्सिङ र मास्टरिङ गरेका छन् । अडियो डबिङ रिमा रेकर्डिङमा मनोज खड्काले गरेका छन् ।
म्युजिक भिडियोको परिकल्पना तथा निर्देशन प्रकाश सपूतले नै गरेका छन् भने सुनिल बिकले उनलाई सघाएका छन् । गम्भिर विष्टको कोरियोग्राफीमा सुबोल थापाले सहयोग गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा नम्रता श्रेष्ठ, प्रकाश सपूत, कविता नेपाली, अनिता चलाउने र निरज पन्थीको अभिनय रहेको छ । नवराज उप्रेतीको सिनेम्याटोग्राफी रहेको म्युजिक भिडियोमा रविन्द्र न्यौपानेले असिस्टेन्टका रुपमा सिनेम्याटोग्राफर बनेर काम गरेका छन् । प्रविण भट्टको सम्पादनमा तयार भएको भिडियोलाई श्याम कुँवरले कलरिङ गरेका छन् ।